URavshana Kurkova: biography nokuphila komuntu siqu, kungani ehlukanisa noBachurin noTkachenko
Kungani uRavshana Kurkova engashadi
U-Ravshana Kurkova ungumlingisi omangalisayo nomnandi kakhulu. Ekubukeka kwayo abaningi bakhangwa izici ezicashile zaseMpumalanga - njengokungathi uSheyisada ngokwakhe ushiye amakhasi "angu-1000 nobusuku obunye". Emcimbini womdlali, wabutha abalandeli abaningi ngenxa yezindima ezihlukahlukene lapho umdlali we-actress enza kahle kakhulu. Ezinye izici zokuphila kweRavshans zithandekayo emphakathini hhayi ngaphansi kwetalenta yombhali kanye nedatha yangaphandle. Abaningi bakhathazekile yimibuzo: kungani uRavshana Kurkova engashadi, obani ohlangana naye, umlingisi omdala kangakanani, kungani ebukeka esemncane futhi encane kangaka? Sizolinga ukuvula leveli futhi sifunde mayelana nezinto ezilandelayo ngemuva kobuhle baseMpumalanga, biography kanye nokuphila kwakhe komuntu siqu. Futhi-ke, sizokwazi ukuthi uRavshane Kurkova uyakwazi kanjani ukuzigcina ehle kakhulu.
Biography kaRavshany Kurkova
URavshan wazalwa ngo-1980 enhloko-dolobha yase-Uzbekistan - iTashkent. Umkhathi wokudala wagijima le ntombazane kusukela ekuzalweni. Ubaba ungumdlali wezemidlalo, futhi umama ungumlingisi nomqondisi wefilimu. Abazali bakaRavshan bafunda kwelinye lamayunivesithi angcono kakhulu wezemidlalo yezwe - i-VGIK. Lapho bahlangana futhi banquma ukuqala umndeni. Kusukela ebuntwaneni, uRavshan wayejabule kakhulu ngomsebenzi wokwenza umsebenzi, wazi konke ukucabangela kwenqubo yokudubula futhi waphupha ngokulandela izinyathelo zabazali bakhe esikhathini esizayo. Kodwa ubaba nomama bebebhekene nekusasa elinjalo kumntanakho futhi befuna ukuba afunde umsebenzi obaluleke kakhulu.
UBahram Matchanov - uyise kaRavshan
URano Kubaeva - umama kaRavshany
Ugogo nomkhulu uRavshany - ukukhuliswa okuqinile nokuthanda okungenamkhawulo
Inendima ebalulekile ekubunjweni komuntu we-actress yadlala ngugogo wakhe nomkhulu wakhe. Ukuphikisa okubili, ngayinye ngendlela yayo yathonya umlingiswa wentombazane.
Esithombeni - uRavshana Kurkova esemncane
Ugogo ngudokotela ochwepheshe. Wayengumsekeli wemfundo eqinile. Ngakho-ke, uRavshana omncane wayehlala ohlelweni olucacile. Intombazane yayingavunyelwe ukuhamba kuze kube sekwephuzile, isikhathi sokushaya izingcingo sasigcinwe futhi - kungabi ngaphezu kwemizuzu engu-15 ngosuku. Kodwa, noma kunjalo, ugogo wayemthanda kakhulu umzukulu wakhe omncane. Ngakho-ke, wafunda ngokugcwele, kanti umama uRabshana oneminyaka engu-18 ubudala waqeda izifundo zakhe eVGIK.
Kulo mfanekiso - ugogo uRavshana ebusheni bakhe
Ugogo wayengumuntu ongcono. Umlingisi ukhumbula ngokufudumala nokubonga izingxoxo zabo ngaphansi kwesibhakabhaka esinezinkanyezi, ukufundwa kwamabhuku ezintshonalanga nezintandokazi ze-chess ezithakazelisayo. Umkhulu waba yisibonelo somuntu ofanelekayo kuRavshan. Wayelokhu efuna ukuthola indoda enomusa, enakekelayo futhi eqinile eyayingaba njengomkhulu wakhe omthandayo ukudala umndeni.
Akukona kuphela ukukhuliswa kwakhe okuhloswe indodakazi yomndeni wakhe wonke. Kunakekelwa kakhulu emfundweni yalo. Le ntombazane yaqeqeshwa esikhungweni esihle kakhulu sezemfundo e-Asia yonke Ephakathi - iTashkent Musical School okuthiwa yiV V. Uspensky.
Khona-ke, uRavshana wafunda esikoleni esizimele esikhethekile eTashkent - I-International House. Zonke izifundo ezikulo zazifundiswa kuphela ngesiNgisi - emva kokuphothula iziqu, umfundi wesikole esiphakeme uhlele ukutadisha eNyuvesi yaseLondon. Ekupheleni kweminyaka engu-90 umndeni wathuthela eMoscow, lapho intombazane yangena khona ePitoagogical University e-Faculty of Philology.
Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme uRavshan Kurkova wasebenza njengomhleli wombukiso wenkulumo kuthelevishini, futhi wazi kahle umsebenzi wokusiza umqondisi. Le ntombazane ihlale ifuna ukuthola iphupho lezingane futhi ibe ngumdlali wezemidlalo kanye nomqondisi. Ngakho-ke, umlingisi wekusasa wenezela imfundo yakhe eyisisekelo nge-Courher Directing Courses. Ngaphezu kwalokho, wazi kahle amakhono okwenza ngokufunda izifundo zikaTatiana Pyshnova.
URavshan waqala ukuvela kumafilimu esemncane. Lapho eneminyaka engu-12 wabamba iqhaza kule filimu ethi "Imfihlakalo YamaFerns". Kwakungokucabanga kwefilosofi endlini yesakhiwo sobuciko kusukela kumqondisi uRashid Malikov.
Ngemva kokuphothula izifundo zokuqondisa nokuziphatha, uRavshan wathola izindima eziningi ze-episodic, ze-secondary. Kodwa udumo lwakhe ludluliselwa kwifilimu ethi "Barvikha", lapho adlala indima yentombazane enhle kunazo zonke esikoleni nasesikoleni, umhlali we-elite Rublyovka - Angela Konkulova.
Ngokuphelele, umdlali wezithombe unamafilimu angaphezu kwangu-40. Futhi izindima uRavshan azenzayo zihlukile futhi zihluke ngokuphelele. Akanayo indima emisiwe, njalo lapho evela phambi kombukeli ngezithombe ezahlukene. Futhi lokhu kukhuluma ngamakhono aphezulu asebenzayo we-actress. Esithombeni - uRavshana kuleli filimu "i-cinema yaseNdiya", ngo-2009.
Indima ebaluleke kunazo zonke eRavshan isithombe sikaMavluda Edgarova ebhayisikobho "Futhi sisegcekeni." Kule ifilimu, umlingisi udlala indima yodokotela wesifazane, owadingeka esuka eSamarkand eMoscow efuna umyeni wakhe olahlekile. Esikhathini esithombeni - Indima kaMavluda ebhayisikobho "Futhi egcekeni lethu" kwaletha ukuthandwa nakakhulu kuRavshane Kurkova.
"Ukuvakashelwa Okusheshayo" - URavshan mayelana nefilimu "Futhi sisegcekeni"
Kodwa hhayi nje kuphela izindima eziyinhloko zomdlali we-actress kubangela ukuzwakalisa kubalandeli be talenta lakhe, ngisho nezindima zesibili azihambelani. Isibonelo, abaningi bakhumbula isithombe sikaNellie kusuka kubhayisikobho "Isiqhingi sabantu abangadingekile." Lapha uRavshan wakwazi ukudlala indima engathandeki yenkosikazi ye-protagonist - uNellie.
Akusikho isithombe esithakazelisayo se-actress esakhayo nasesiteji. Uhlanganyela emaqenjini anjalo aseshashalazini njenge "Black Russian", "Illusions", "Ukungavumelani eside ukwamukela" kanye drama epulasitiki "Amakamelo". Esikhathini isithombe kukhona ukusebenza "Ukuvuma ngokungapheli" ngokuhlanganyela kukaRavshana Kurkova.
Ngazama ukubamba iqhaza kukaRavshan, ukudubula ngeziqeshana. Umsebenzi okhanyayo - ividiyo yezingoma "I-Tenderness" yeqembu iMachete. Inselele yentombazane enomusa, ephuphayo futhi enesithakazelo ngokusobala yayiyimpumelelo kumdlali we-actress. Yingakho hhayi umculo kuphela, kodwa futhi uchungechunge oluhle lwevidiyo lwaziswa kakhulu yizilaleli.
U-Ravshana Kurkova - impilo yakhe yomdlali wesifazane, amanoveli akhe nemishado esemthethweni
Umsebenzi we-actress eRavshan uye wakhula ngempumelelo. Ubhekwa njengomunye wabadlali abathanda kakhulu, abanobuchule nabahle kakhulu. Unolwandle lwabalandeli kanye nohlu lonke lwezindima eziphumelelayo kumafilimu athandwa kakhulu.
Kodwa, ngeshwa, empilweni yomuntu siqu yomdlali we-actress, konke akufani nefu njengoba singathanda. Imishado emibili ephukile, uchungechunge lobuhlobo obungavumelani kanye neziningi zamanoveli ezibhekiswe kumdlali wezithombe abalandeli bakhe noma izitha zakhe - lokhu kungumphumela wokuthola izibopho zomndeni ezifanele. Nakuba lo mdlali weqhwa ngokwakhe engacabangi ukuthi awuphumelelanga ngaphambili kwakhe. Ujabule ngokuphila kwakhe, futhi abalandeli abamcebisa ukuba bashade ngokushesha futhi babe nezingane (bathi, ubudala bucindezela) bacabanga ukuthi bangabantu abangenangqondo nabangenaziphukuphuku abathunjiwe nezinkohliso.
Umyeni wokuqala we-actress ngumthwebuli wezithombe uSenen Kurkov. Wahlangana naye ngenkathi esengumfundi futhi efunda emnyangweni we-philology. Umshado wathenjiswa ukuba uqine, ngoba lo mbhangqwana osemusha wawuphupha ukuthi umndeni wabo ujabule, futhi wawuzwa njalo ukuhleka kwengane, ukuhleka kwengane. Kodwa isiphetho silungiselele ukuhlolwa okulukhuni kubathandi - ngenyanga yesihlanu yokukhulelwa uRavshan walahlekelwa yingane. Ngalokhu kuhlolwa kokuphila, abantu abasha bahluleka futhi ngokushesha bahlukana. Mhlawumbe yingakho inkanyezi ye-TV ayithandi ngaleyo ndlela lapho ebuzwa ukuthi unabantwana.
U-Semen Kurkov uyindoda yokuqala kaRavshan
Yehlulekile imizamo yokwakha umndeni ongcono. Kungani uRavshan Kurkova ehlanganyela no-Ilya Bachurin no-Artem Tkachenko?
Umyeni wesibili waseRavshan ngu-Artem Tkachenko. Ekuqaleni babeboshwe ubungane, kodwa ubuhlobo obufudumele buba yincwadi futhi kwaphela umshado osemthethweni ngo-2004. Wahlala iminyaka emine nje futhi wahlukana ngenxa yokungafuni ukugcina ubaba ka-Artyom.
U-Artem Tkachenko - umyeni wesibili womdlali
Eminyakeni embalwa emva kokuhlukaniswa, uRavshan wayehlala yodwa, nakuba ayehlala ephupha ngokuthola owodwa kuphela ongayakha umkhaya ogcwele, abe nezingane futhi aphile ngokujabula njalo. Ngo-2012, umdlali wezithombe ufunda no-Ilya Bachurin, umqondisi jikelele weqembu le-Glavkino. URavshan no-Ilya babevame ukubizwa ngokuthi umbhangqwana omuhle kakhulu embonini yefilimu.
Ngokusemthethweni, lo mbhangqwana awuzange uhlele ubuhlobo bawo, kodwa uRavshan wayesenethemba lokuthi lo nguye ozokwenza inhlalakahle yomndeni wakhe. Kodwa lo mbhangqwana ongabhalisiwe wawuyi-fiasco. Ngemva kweminyaka engu-3.5, uRavshan no-Ilia bahlukana. Emaphephandabeni, bachaza ukuthi bahlala bangabangane abahle futhi bengagcini okubi.
I-Scandal ne-Fedor Bondarchuk enendima yendikimba
Cishe ngesikhathi esifanayo, lo mshini uthola izithombe ezitholakala ku-instagrams yomdlali, lapho uRavshan noFyodor Bondarchuk bebukeka kahle futhi behlelwe kahle ngaphambi kwe-lens. Ukubukeka kwezithombe ngokuphelele ngaphandle kwendawo kuhambisana nenqubo yesehlukaniso yomdlali odumile nomqondisi.
Abantu abaningi abathandekayo bathi uFredor noRavshan bangabathandi, futhi yingakho umshado omude nojabulisayo weBondarchuk waqhekeka. Ama-Fallovers awazange aqinisekiswe ngisho nezithombe ezihlangene zikaRavshan no-Svetlana Bondarchuk, kanye nesithombe se-actress nomyeni wakhe u-Ilya Bachurin, owabeka ekhasini lakhe ngemuva kwalawo angaphambilini.
Yini eyenza ukuthi isehlukaniso i-Bondarchuk - ayingaziwa, lesi sidumo asikho. Kodwa izithombe ezihlambalazayo azizange zizuze idumela lobuhle baseMpumalanga.
U-Ravshana Kurkova uhlangane nobani manje futhi kuyiqiniso yini ukuthi lo mdlali ushadile?
Manje, ngemva kwezindaba ezithandekayo nezihlambalaza, le nkanyezi yefilimu ifuna ukuthula mayelana nemininingwane yokuphila kwakhe. Kodwa muva nje abezindaba bavela ezihlokweni ukuthi ngo-Agasti 2017, umlingisi washada kabusha. Abakhethiweyo abasha baba umlingisi uStanislav Rumyantsev. Kuthiwa lo mfana osemusha futhi ojabule wanqoba inhliziyo kaRavshan, futhi umehluko wakhe emdala awumvimbeli ngokuphelele (uneminyaka engaphansi kwengu-10 kunomakhethi wakhe).
Esithombeni - uRavshana Kurkova noStanislav Rumyantsev Abazange baqale ukukhangisa umshado wabo futhi bashada ngasese edolobheni laseSochi - amaphephandaba awaziwayo. Kodwa uRavshan ngokwakhe uphikisa amahemuhemu ngomshado wakhe, ekhetha ukunganaki izimpikiswano ezihlobene nokuphila kwakhe komuntu siqu. Umdlali we-actress kuphela uhlanganyela ngemicabango yakhe eyimfihlakalo ngalokho okushiwo uthando lwangempela. Kule vidiyo - uRavshan Kurkova on okufanele ube ngu-100% uthando.
Kungani uRavshan Kurkova encane kangaka ebheka futhi encane kangaka?
Enye yemibuzo ejwayelekile kakhulu ehlobene nokubukeka kukaRavshana - ubuhle bungakanani ubudala? Abaningi bacabanga ukuthi usemncane kakhulu. Umdlali we-actress akafihli iminyaka yakhe futhi ubonakala enhle eminyakeni engu-37. Uma ungabheka imininingwane yakhe yepasipoti, cishe akunakwenzeka ukukholelwa.
Lapho eseyingane, uRavshan wabhekana nokuncipha kwakhe, njengase-Uzbekistan kwakukhona nezinye izici zokuhle - lezi zindlela eziluhlaza futhi ezinomusa. Kodwa manje ukuthi yini eyayidideka intombazane eyayisezweni lakubo yayiyinzuzo yakhe enkulu. Izakhi zofuzo ezigcwele ukugcwaliseka kuye kwaba yisibambiso sokuthi umlingisi ubheka kancane kuneminyaka yakhe.
Ezingxoxweni zakhe, uthi akazitholi izidlo futhi uvame ukuvumela ukuba adle i-high-calorie futhi hhayi ukudla okuwusizo kakhulu. Futhi imfihlo yokuvumelana kwakhe ibheka izakhi zofuzo, ukudlala ezemidlalo kanye nesimo sengqondo esihle. Lezi zingxenye ezintathu azivumeli ukuba alulame, avumele ukuba ahlale efomeni elihle kakhulu futhi ajabulise abalandeli hhayi kuphela ngemininingwane yabadlali abanamakhono, kodwa futhi ngokuvumelana nokubukeka okungenakuqhathaniswa namanothi amancane, amanothi asempumalanga.
URavshana ngesimo sawo esihle
Ukuphila komuntu siqu kaMaria Kulikova: uthando olukhulu, idrama yomndeni kanye nokuphila ngemva kwesahlukaniso
Uyabona le nqubomgomo ebuntwaneni? Sifanele emithethweni emincane
Kungani ukulimala kuvela emva kokusikhipha?
Kungani ngifunga ebusuku? Ingxenye 1
Indlela yokudala isimo sengqondo intombazane
Indlela yokuqeda ukucindezeleka uma uhlala umhlalaphansi?
Indlela yokuhlala yedwa
Isifuba esihle kakhulu emhlabeni
Isithombe se-volts eyizinkulungwane: i-neon kagesi - umkhuba omusha wesimo
Imithetho yokusinda nezingane ezingasebenzi kahle
Indlela yokwenza isihlahla sikaKhisimusi sama-cones, isigaba somfundisi esinesithombe